AbaThengisi beMask kunye neFeksi ye-Mas95 - abaTshini beMask beMK95
Yintoni impahla yokunikhusela kunyango? -Ingcaciso kunye nesicelo sezinto zokhuselo zoNyango, ekwabizwa ngokuba sisuti yokhuselo lwezonyango, ikhuselo lokukhuseleka elilahliweyo, okanye i-antivirus suit. Iingubo zokhuselo zonyango zibhekisa kwisinxibo esikhuselayo esisetyenziswa ngabasebenzi bezonyango (ogqirha, abongikazi, abasebenzi bezempilo bakarhulumente, abacoci, njl .njl) nabantu abangena kwiindawo ezithile zempilo (ezinjengezigulana, iindwendwe zesibhedlele, abantu abangena kwindawo yosulelo, njl. Njl.) . Izambatho zokukhusela ezonyango zine-moi elungileyo ...
Eli nqaku liza kucacisa ngokulingeneyo ukhuselo lokonyango kwezi zinto zi-4 zilandelayo. Ukuveliswa kwesinxibo esikhuselayo kwezonyango Zeziphi izinto eziqhelekileyo zokuhlambela kunye nokusebenza kwengubo yokhuselo lwezonyango. Ukuveliswa kwempahla yokhuseleko Iimfuno ezisemgangathweni zengubo yokhuseleko yezonyango Yeyiphi imigangatho yomgangatho oqhelekileyo? Zithini izinto zovavanyo? Uyisebenzisa njani ngokufanelekileyo impahla ekhuselayo? Ndinxibe iodolo yokhuselo lwezonyango. Umyalelo wokuba uhambe ...
I-3m KN95 Mask